राशिअनुसार तपाईंलाई जागिर फाप्छ कि व्यापार ? - IAUA
ramkrishna October 19, 2017	राशिअनुसार तपाईंलाई जागिर फाप्छ कि व्यापार ?
कुनैपनि काम थाल्नुअघि ज्योतिषशास्त्र अनुसारको ठाउँ र समय हेर्ने चलन पूरानो हो । यसो त ज्योतिषशास्त्र एउटा अनौठो विज्ञान हो जसलाई सारा विश्वले कुनै न कुनै रुपमा स्वीकारेको छ ।
तपाईंको राशी अनुसार काम नगर्दा कतिपय अवस्थामा तपाईं असफल पनि हुन सक्नुहुनेछ । पढाइका लागि कुनै विषय छान्दा होस्, वा कुनै व्यापार गर्दा कुन राशिलाई कुन जागिर वा व्यापार फाप्छ त ? हामीले बरिष्ट ज्योतिषहरुसँग गरेको कुराकानीका आधारमा निष्कर्ष निकालेका छौं । हेरौं कुन राशीलाई कुन जागिर वा व्यापार फाप्छ ।
वृष : यो राशिभएकाहरुलाई कलाकारिता फाप्छ । व्यापार गर्ने यो राशिका मानिसहरुले गाडीका पाठपूर्जा, इलेक्ट्रिक सामानको व्यापार, वा चलचित्र वा सङ्गीतसंग सम्बन्धित व्यापार गर्यो भने निकै फाप्छ । सेतो रङ्ग यो राशिको शुभ रंग हो । किरानाको व्यापार पनि फाप्ने यो राशि भएका व्यक्तिहरुले हरियो कपडा हत्तपत्त प्राय: गर्नु हुन्न । यो राशिलाइ पनि समग्रमा जागिर नै फाप्छ
मिथुन: यो राशि भएका व्यक्तिहरुले जागिर नै गरेको राम्रो हुन्छ । शुभ रंग हरियो भएको यो राशिका व्यक्तिहरु कला क्षेत्रमा निकै राम्रो हुन्छन् । यिनीहरुले अध्यापन क्षेत्रमा निकै राम्रो गर्न सकछन् । यी राशि भएका व्यक्तिहरुले एकाउन्ट, फाइनान्स वा गणित विषय लिंदा धेरै राम्रो हुन्छ । व्यापारका हिसावले यो राशिका मानिसहरुलाई कृषिजन्य सामाग्री वा कृषिको व्यापार निकै फाप्छ ।
सिंह : यो राशिका व्यक्तिलाई जागिर नै फाप्छ । यो राशि भएका व्यक्तिले बसेर गर्ने काम गर्दा फाइदा हुन्छ । लेखापाल, कम्प्युटरको काम आदि बसेर गरिने काम गर्दा यो राशि भएका व्यक्तिलाई निकै फाप्छ । यो राशि भएका व्यक्तिले व्यापार नै गर्ने हो भने कपडाको व्यापार गर्दा राम्रो हुन्छ ।कन्या : गणेश भगवानको पूजा आराधना गरेर कुनै पनि काम गरे यो राशिलाई फाइदा हुन्छ ।
मकर : यो राशिलाई पनि प्राय : व्यापार नै फाप्छ । मेशिनरी, मर्मतको काम, कम्प्युटर, सिभिल इञ्जिनियर, आर्किटेक्ट, वास्तु विज्ञान, गुप्तचर, वैज्ञानिक जस्ता पेशामा यो राशिलाई निकै फाप्छ । यो राशिले पानीसंग सम्बन्धित काम भने नगरेको राम्रो । जागिर खाने हो भने यो राशिका व्यक्तिले शिक्षक बनेको राम्रो हुन्छ ।
कुम्भ: यो राशि भएका व्यक्तिलाई व्यापार फाप्छ । यो राशि भएका व्यक्तिको कार्यक्षेत्र अधिकांश मकर राशिसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ । किनभने यी दुवै राशिको स्वामी शनि हो । त्यसैले यो राशिलाई पनि प्राय : व्यापार नै फाप्छ । मेशिनरी, मर्मतको काम, कम्प्युटर, सिभिल इञ्जिनियर, आर्किटेक्ट, वास्तु विज्ञान, गुप्तचर, वैज्ञानिक जस्ता पेशामा यो राशिलाई निकै फाप्छ ।
Previous Previous post: कम्प्युटर कत्तिको रिफ्रेश गर्नुहुन्छ ?
Next Next post: एक बैंकरको सफलताका सुत्र: सफलता Need ले होईन Speed ले आउँछ